> Resource > Beddelaan > FLV in Converter AVI: Sida loo badalo FLV in AVI
In kastoo FLV loo yaqaan qaab faylka online ugu used (gaar ahaan YouTube), ma ahan offline sida loo jecel yahay. Qaar ka mid ah qalabka la qaadi karo ay ka mid yihiin Nokia, Madaxweyne Siilaanyo, Blackberry, PSP iyo iwm uma muuqato in ay taageero ama la jaan qaada video FLV ah. Si aad u samaysaan ugu xumaa, codsiga xitaa Flash ciyaaryahanka mobile ayaa joogsatay by Adobe. Sidaa awgeed, waa mid aad u badan tahay in aad rabto in aad doonaa si loogu badalo videos FLV in ay qaab AVI ah sidaasay ahaan doontaa playable ku kombuyuutarrada gacanta kor lagu soo sheegay ama software kale.
Qeybta 1: Best FLV in AVI Video Converter
Qeybta 2: FLV Free in AVI Converter
Qeybta 3: FLV Online in AVI Converter
Qeybta 4: Extended Knowlege u FLV iyo AVI
Soo bixi FLV video files hadda noqon kartaa loo maqli karo ee qalabka ugu.
Files badaley ayaa sidoo kale lagu kaydin karaa qaab image file ISO ah.
Diinta Dufcaddii Support la 30X ka dhaqso badan converters kale laga heli karaa.
Samaynta, Iyo La shakhsiyeeyo aad collection of videos galay DVD ah.
Sida loo badalo FLV ah in AVI
Interface ee Video Converter Ultimate ayaa loogu talagalay in aad user-friendly iyo inuu kaa caawiyo meel baahida bilowga ah. Xitaa haddii ay markii kuugu horreysay diinta file video ah, oo dhan ee aad u baahan yahay kaliya seddex tallaabo ah oo sahlan.
1. Import faylasha FLV
Si loo dar videos wareejisaa Converter Video Ultimate , miyaanay idiin jiidin-iyo-tagi karaan si toos ah iyaga. Diinta Dufcaddii ayaa sidoo kale taageeray oo asal ahaan ka dhigan tahay in aad u bedeli karaan wax ka badan hal video files waqti. Wax kale oo aan ahayn, waxaad sidoo kale abuuri kartaa video ee playlsit iyaga oo ku biirtay wadajir adigoo sax ku midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file .
2. Dooro ka presets ah
Maadaama uu taageero qaab wax soo saarka ballaaran, aad dhab dhigay karaan qaabab kala duwan ee wax soo saarka video files kasta ama doortaan qaab AVI sida wax soo saarka aad. On top of in, haddii aad qorshaynaysid in Radidiyaha files AVI kuwaas oo aad Blackberry, PSP ama qaar ka mid ah oo kale AVI taageeray ciyaartoyda, aad si fudud u dooran kartaa presets filaayo in qalabka aad doorbiday.
3. U beddelaan faylasha aad
Hadda, waxaad riixi kartaa badalo si ay u bilaabaan diinta files FLV si aad u AVI ah. Tani dareen video Converter oo kaliya ma aha hagaajiyo waafaqsan loo maqli karo ee files FLV aad ka, laakiin sidoo kale u ogolaataa in aad wax badan ka sii bixi video goobaha internetka sida YouTube, Hulu iyo vimeo.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo FLV in ay AVI Video Converter for Windows
Qeybta 2: More fursadaha: FLV Free in AVI Converter
# 1. Free Video Converter: Wondershare FLV Free in AVI Converter
Waxaad kala soo bixi kartaa videos kasta oo aad jeceshahay ka video goobaha internetka sida Youtube iyo inta ka dibna waxaa loogu badalo in ay labada AVI ah ama wax kasta oo qaabab kale oo ay taageero u aad telefoonada gacanta ama kiniiniga.
Pro: waxba Qiimaha!
1. Standard xawaaraha diinta.
2. Muuqaalada tafatirka Limited.
Qeybta 4: Aqoonta Extended u FLV iyo AVI Qaabka
FLV, waxay la mid yihiin oo kale conta iners, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in uu kaydiyo xogta audio video iyo labada. Habka uu encoded aad uula mid tahay qaabka faylka Jabbuuti ka. AVI waa weel multimedia ay ku jiraan xogta audio iyo video labadaba. Waxa ay u ogolaataa audio-la-video loo maqli synchronous. Files AVI taageeraan badan audio geeyo iyo video
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file FLV ah
Sida loo dar subtitles in MP4 Files Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file AVI ah
c Sida loo Guba AVI in DVD on Windows 8